Dhammaan wixii ku saabsan barta wararka ee iPhone | Warka IPhone (Bogga 3)
Marka, ha moogaanin talooyinkeenna si aad u hagaajiso waxqabadka batteriga ee iOS 10 oo aad u dheereyso nolosha batteriga.
7-da khaladaad ee ugu badan ee iOS 10 iyo sida loo saxo
Waxaan diyaarinay liistada leh khaladaadka ugu badan ee ku jira macruufka 10 waxaanan ku tusineynaa waxa xalalka ah, si aad u hagaajiso qalabkaaga naftaada.
Maanta Actualidad iPhone waxaan kuu soo qaadaneynaa cashar ku saabsan sida loo midoobo Apple Watch-kiiagii hore iPhone-ka cusub iyada oo aan xog laga lumin.
Sidii ay uga dhacday Pokémon Yellow sanado badan ka hor (Pikachu), waxaa nala socon kara Pokémon meel walba.
Sida loo wareejiyo xogta ka iPhone jir si iPhone cusub 7/7 Plus
Maanta waxaan kuu sheegeynaa sida xogta ka timid iPhone-kaaga hore illaa iPhone-ka cusub ee 7/7 Plus loogu raaco habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee suurtogalka ah iTunes.
Podcast 8 × 02: IOS 10 halkan ayuu joogaa, iyo iPhone 7 ku dhowaad
Podcast oo aan ku falanqeyneyno imaatinka macruufka 10 iyo qaybaha kale ee barnaamijyada Apple, oo waxaan sii deyn doonnaa astaamaha cusub ee WhatsApp ee iOS
Maanta waxaan ku tusinaynaa sida loo keydiyo booska haddii aad tahay isticmaale joogto ah ama aad ka tirsan tahay Apple Music, oo ah nidaam lagu hagaajiyo xusuusta iOS.
Wax badan ha sugin, rakib macruufka 10 hadda kadib casharkaan
Ku rakib macruufka 10 ee ugu dambeeya hadda casharradan fudud ee aan kuu keenay. Tallaabooyin yar ayaad ku guuleysan doontaa, waan kuu sharxi doonnaa.
Fiidkii ugu horreeyay ee xilligii siddeedaad ee 'Actualidad iPhone' kaas oo aan ku falanqeyneyno dhammaan wararka ay Apple soo bandhigtay iyadoo lala wadaagayo iPhone 7
Horyaalada Yurub ayaa bilaabay inay soo baxaan xilli ciyaareedkaan 16/17, waxaana iyaga la jira, shakiga soo laabanaya in badan oo ka mid ah ...
Qandhada 'Pokémon fever' laguma waayi karin kaaliyaha dalxiis ee ugu caansan deegaanka Apple. Siri ma rabin inuu sii joogo ...
Muuqaal xiiso leh oo kaa caawin doona inaad si fiican u fahamto gudaha iyo dibedda waxa hadda ah shirkadda ugu qiimaha badan adduunka.
Ma dooneysay inaad ku isticmaasho iMessage Android? Apple ma soo bandhigin WWDC-dii ugu dambeysay ee 2016 iminkana waan ognahay sababaha. Maxay ahaayeen
Podcast 7 × 11: dheji WWDC hangover
Shirka Apple World Developers Conference (WWDC) wuxuu keenay war badan, dhammaantoodna waxaan uga wada hadalnay mowduucyadeena. Kaalay!
Tani waa fikrad iPhone 7 ah waxaan jeclaan lahaa inaan arko iyadoo run ah
Waxaan helnaa sawirro fikradda ah iPhone 7 oo laga sameeyay aluminium iyo muraayad oo aan jeclaan lahayn inaan run aragno, maxaad u malaynaysaa?
7x10 Podcast: Aqoonsiga Taabashada ee Mac?
Toddobaadkan Podcast-ka waxaan ku soo qaadaneynaa wararkii ugu dambeeyay ee WWDC, saacadaha cusub ee loo yaqaan 'Pebble', kan ugu dambeeyay ee 'Spotify', iyo inbadan.
Kadib xanta badan ee u dhiganta Amazon Echo ee Apple waxaan darseynaa suurtagalnimada in tani ay tahay AirPort cusub, Apple waxay umuuqataa inay tilmaamo bixinayso.
Miyaad haysaa iPhone ay ku xidhan tahay iCloud? ICloud qufulka ma laga furi karaa? Soo ogow sida loo furay iyo sida sharci ahaan aad uga saari karto qufulka iCloud.
Wararka aan Apple ka codsado iOS 10
Waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa warka aan jeclaan lahayn inaan ku aragno macruufka 10 bisha Juun 13 ee WWDC16, Apple horey ayey u heshay fasax sanadkii hore, waa inaan cusboonaysiinaa.
Qeybtan toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa isbeddelka uu Instagram ku sameeyay muuqaalkiisa, cusbooneysiinta barnaamijka, iPhone 7 ... Kaalay!
Caawiye cusub oo dalwad ah ayaa ka dhashay gacanta abuurayaasha Siri, waxaan falanqeyneynaa khatarta ay tani ku tahay Apple iyo sida wax looga qaban karo.
Apple waxay la kulantaa dhowr podcastcast si ay u maqasho waxa ay tabanayaan
Toddobaadkii weynaa ee Podcasters-ka waxay yimaadeen xarumaha Cupertino si ay kulan ugu qabtaan una muujiyaan cabashooyinkooda ku saabsan adeegga ay bixiso shirkadda Apple
Waxaan dib u eegeynaa dhammaan wararka Apple toddobaadkan, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah khilaafaadka ka dhashay Phil Schiller, hadalada Tim Cook iyo waxyaabo kale oo badan.
Soo koobid toddobaadle ah oo ay la socdaan wararka ugu fiican ee la xiriira iPhone gaar ahaan iyo guud ahaan dunida Apple.
In Actualidad iPhone waxaan ku baraynaa sida loo sameeyo AirPlay ka macruufka ilaa Android si fudud hal codsi iyo dhibaato la'aan.
Qeybtan waxaan ku eegeynaa arrimaha Apple ee hadda jira, annaga oo ka faalooneyna natiijooyinka ay shirkaddu ku heshay warbixinteeda maaliyadeed iyo in ka badan.
Waxaan ku tusineynaa sida loo badalo muuqaalka galka iOS 9 laga soo bilaabo laba jibbaar ilaa wareega iyada oo aan JAILBILA ama wax dhibaato ah, lagu beddelin oo hab ammaan ah.
Hearthstone wuxuu kicinayaa ballaarintiisa cusub, Whisper of the Old Gods
Ku argagax dhammaan astaamaha cusub ee ay soo bandhigtay ballaadhintan cusub iyo dhejinta 5.0 ee ciyaarta kaararka caanka ah, Hearthstone. Maxay kula tahay
Qeybtan cusub ee barnaamijkeenna toddobaadlaha ah waxaan uga hadlaynaa MacBook-yada ay soo bandhigtay Apple toddobaadkan, fikradaha iOS 10 iyo WWDC 2016.
Bilowgii toddobaadkan, Siri codsi ka yimid adeegsadayaasha ayaa noo soo sheegay taariikhda ay ...
Freedom POP, internetka bilaashka ah meel kasta oo ugu dambeyntii timaadda Spain!
Freedom POP wuxuu yimaadaa Isbaanish si uu ula jabiyo aasaaska, u diyaargarow inuu helo wicitaano bilaash ah, xog iyo sms meel kasta oo adduunka ah!
Yousician waa codsi loogu talagalay iPhone, iPad, Android, Mac ama PC mahadnaq taas oo aad ku baran karto ku ciyaarida biyaano, baas, gitaar ama ukulele.
WhatsApp waxay leedahay xoogaa xeelado ah si loo helo waxqabad wanaagsan oo ku jira Actualidad iPhone waxaan dooneynaa inaan kuu sheegno wax walba oo iyaga ku saabsan.
Waxaan tijaabinay ChatSIM, SIM-ka kuu ogolaanaya inaad kaga hadasho WhatsApp "BILAASH" aduunka oo dhan.
ChatSIM waa SIM kuu ogolaanaya inaad isticmaasho farriimaha degdega ah € 10 sanadkiiba iyadoo laga helayo meel kasta oo adduunka ah adigoon ka walwalin meertada iyo megabeytka.
La soco Apple, noocyada waaweyn ee Shiinaha ayaa isku diyaarinaya inay ka degaan Yurub
Marka hore waxay ahayd Meizu haddana waa Xiaomi oo qaadaysa tillaabooyinkeedii ugu horreeyay ee ku wajahan Yurub, maxaa dhici doona? Sidee tani u saameyn kartaa Apple? Soo gal oo soo ogow.
Ka dib markii la soo saaray iPhone SE cusub iyo iPad Pro ee 9,7 inji, xasilooni deg deg ah ayaa timid ...
Google wuxuu tixgelin doonaa inuu isticmaalo Swift on Android
Google wuxuu hirgelin karaa Swift on Android, luqadda barnaamijka ee ay abuurtay Apple. Maxay malayn kartaa? Soo gal oo nala soo baro ...
Waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loo isticmaalo Remote Play-ka PlayStation 4-kaaga ee Mac OS, sidaa darteed waxaad ugu raaxeysan kartaa cayaarahaaga sida ugu buuxda.
Sanadihii la soo dhaafay, shirkad kastaa waxay qaadataa dhawaq maareynaya inay ka dhigto mid aan shaki ku jirin wajiga tartanka. Hubaal…
Waxaan tijaabinay Jawbone UP3, oo ah kormeeraha caafimaadka ee muhiimka ah
Waxaan u dhignay Jawbone UP3 imtixaanka, jijin isku dhafan tiknoolajiyada jarista iyo qaabka sare, shaki la'aan waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee la tixgelin karo.
KinoVR waxaad ku adeegsan kartaa taleefankaaga casriga ah iyo VR Viewer si aad uhesho muraayadaha VR-ga oo gebi ahaanba lajaan qaada kombuyuutarkaaga.
Wax cusub oo xiiso leh oo ku saabsan WhatsApp ee loogu talagalay IOS, hadda waxaan ku dhejin karnaa qoraal geesinimo leh, istiraatiijiyad iyo isaaq. Waxaan kuu sharaxeynaa sida aad u sameyn karto.
Xiaomi wuxuu bilaabi lahaa Mi 2SE si uu ula tartamo iPhone SE cusub
Xanta cusubi waxay soo jeedineysaa in shirkadda weyn ee Aasiya ay raaci doonto istiraatiijiyadda Apple iyadoo soo bandhigeysa dib-u-habeyn lagu sameynayo Mi 2 qalabka iyo naqshadeynta Mi 5.
Waxaan ka hadleynaa All-in-One Happy Chick Emulator for iOS iyo Android waxaanan ku barinaa sida loo rakibo qalabkaaga, NDS, PSP, PS1, Arcade, way kuu wada sheegi kartaa!
Apple waxay heshay sida ugu wanaagsan ee siyaasadeeda deegaanka galabnimadii maanta, waxay na soo bandhigeysaa Liam, aaladeeda jarista.
Qormadan galabta waxay u badan tahay inay Apple sii deyn doonto macruufka 9.3 qof walba, waan kula soo socodsiin doonnaa oo waxaan ku bari doonaa sida loo diyaariyo qalabkaaga.
Berri ugu dambayn shaki ayaan ka bixi doonnaa. Berri, Maarso 21, Apple waxay soo bandhigi doontaa iPhone 5SE, iPad ...
Ubisoft waxay dhawaan soosaartay waxa ugufiican ciyaarta 'Assassin's Creed' ee ku saabsan IOS, oo ah qaab ku wajahan qunsuliyadaha kujira jeebkeena.
PhoneDrone wuxuu ku ridayaa jeebkaaga diyaarad heer sare ah oo aan duuliye lahayn oo ka yar € 300, xadka kaliya waa fikirkaaga.
Soo ogow sida loo sameeyo bilig-baxa iPhone-ka markii ay kuu yeeraan ama marka aad hesho nooc kasta oo ogeysiis ah: emayllada, farriimaha, iwm.
Adigoon seegin ballanteena toddobaad kasta, halkan waxaan kuu daayeynaa dib u eegista wararka ugu waaweyn ee ku saabsan dunida Apple.
Ka dib 2 guulo waaweyn, Fishlabs waxay soo bandhigi doontaa waxa ugu hammiga badan ee ciyaarta fiidiyowga ciyaarta ee iPhone illaa taariikhda, soo gal oo la kulan!
Kaamirooyinka ayaa ah udub dhexaadka hal-abuurka moobiilka 2016
Waxaan sahaminay hal-abuurka goobjoogga ka ahaa Mobile World Congress si aan isugu dayno inaan saadaalino sida Apple nooga yaabi doonto sanadka 2016.
Waxaan ku tusineynaa sida ay u xalliyeen hawlgallada xisaabeed ee El Hormiguero iyadoo la adeegsanayo kaamiradda taleefannada casriga ah ee IOS iyo Android ama kiniin.
Waxaan ku bilownay xilli ciyaareedkii toddobaad ee 'Actualidad iPhone podcast' tamarta la cusbooneysiiyay waxaanan dooneynaa inaan sii wadno ka war bixinta wararka Apple. Nagu soo biir!
Toddobaadkan wuxuu ahaa mid kale, codsiyada Facebook ayaa mar kale nacas iska dhigay. Codsiyada waxaa soo saaray ...
Podcast qaas ah oo loogu talagalay wararka MWC 2016 ee Barcelona, ​​in kastoo aynaan ilaawaynin wararka Apple.
Toddobaadkan wuxuu diiradda saaray FBI, Apple iyo arrimaha gaarka ah. Isniintii la soo dhaafay waxaan ku soo toosnay warka ...
Gmail ayaa hadda kuu oggolaan doonta inaad isticmaasho macmiilka iimaylka adiga oo aan lahayn cinwaanka @gmail
Google waxay hadda u oggolaaneysaa, si caqli gal ah, inay adeegsato Hotmail, Outlook ama Yahoo! Ku soo dir macmiilka emaylkaaga Gmail.
Waxaa jira waxyar iyo wax ka yar taariikhda la filayo in la soo bandhigo ee iPhone 5se cusub iyo iPad Air 3. The…
Waxaan jabinaa oo aan falanqeynaa xanta ah in Snapdragon 820 uusan ka fiicneyn Apple A9 waxqabadka. Ma runbaa?
Qeyb cusub oo ka mid ah barnaamijka Podcast ee loo yaqaan 'Actualidad iPad Podcast' kaasoo aan ku falanqeyneyno dhammaan wararka ka soo baxay dunida Apple ee dhacay usbuuca oo dhan.
Waxaan ku soo laabaneynaa waqtigii loogu talagalay toddobaad kasta si aan kuugu soo bandhigno dhammaan wararka ka jira adduunka Apple. Markan waa inaan ka doodnaa ...
Markay usbuucyadu sii socdaan, waxaa sii yaraanaya wax yarna loo hayaa muhiimadda la filayo ee Maarso 15 ee ...
Xanta ayaa noo horseedeysa inaan falanqeyno wararka ku saabsan iPad Air 3, oo la soo bandhigi karo bisha soo socota ...
Waxaan ku falanqeyneynaa Podcast wararka xanta ah ee ku saabsan iPad Air 3, iPhone 5se iyo Apple Watch cusub
Daad kale ayaa xaqiijinaya joogitaanka Khadka Isku xiraha iyo inbadan oo ku saabsan iPad Air 3
Qorshayaal cusub ayaa soo ifbaxaya iyagoo xaqiijinaya wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan joogitaanka Khadka Isku xiraha, dhawaaqa rikoodhka ah iyo LED-ka Flash-ka ee soo socda iPad Air 3.
Kadib Mashruucii Dayaxa ee Google, wuxuu hada doonayaa inuu talaabo hore usii qaado oo 5G ku faafiyo aduunka oo dhan Project Skybender iyo drones-ka qoraxda.
Toddobaad cusub, warar xan cusub. Toddobaadkan waxaan ku soo laabanay si aan uga warbixino wararka xanta cusub ee wali ku sii hareeraysan iPhone 7 iyo ...
Sawirro laga soo daadiyay Shiinaha ayaa na siin kara tilmaamo badan oo ku saabsan iPad Air 3 ee soo socda, wax walba waxay muujinayaan boodbood weyn marka loo eego iPad Air 2.
Google waxaa maanta loo caleemo saaray inuu yahay hogaamiyaha xaqiiqda dalwaddii iyadoo in ka badan 5 milyan oo kartoon la iibiyay, waxaan falanqeyneynaa ismaandhaafka iyo farsamada.
Shirkadda Tesla Motors waxay amaahanaysaa Jim Keller, oo ah hormuudka khadka Apple ee A-taxane ah, halkee ayuu hadda ku maalgelin doonaa tayadiisa?
Warbixinno cusub ayaa soo jeedinaya in Apple ay soo uruurineyso koox khubaro ah si ay u horumariyaan tikniyoolajiyadda dhabta ah ee la taaban karo.
6 × 20 Podcast ee Actualidad iPhone: «Steve Jobs» iyo iPhone 5se
Waxaan bilownay bandhigayagii labaad ee YouTube-ka annagoo la wadaageyna dareenkeenii ugu horreeyay ee ku saabsan Sony "Steve Jobs" waxaanan sidoo kale uruurinnay ...
Toddobaad kasta oo dhaafta, waxaa ku yar imaatinka bisha Maarso, oo ah bisha loo malaynayo in Apple ...
6 Pod 19 Podcast ee Actualidad iPhone: Waxaan u boodnaa YouTube!
Waa waqtigii wajiga laga saari lahaa barnaamijka 'Podcast News iPhone'. Kadib qubeys codsiyo ah kuwa raacsan ...
Xeeladdan waxaad ku raaxeysan kartaa wijital kuu abuuraya marin toos ah goobaha Wi-fi ee qalabkeena macruufka iyada oo aan loo baahnayn in la xiro
Soo koobid cusub oo toddobaadle ah oo leh kan ugu fiican Jarmalka ee la xiriira Apple guud ahaan iyo gaar ahaan iPhone.
Waxaan ku bilownay barnaamijkayaga 'Podcast' sanadkii 2016 wareysi gaar ah oo lala yeeshay Luis Recuenco, horumariyaha iShows, oo ka jawaabi doona su'aalaheena
IPhone News 6 × 18 Podcast: iPhone 7 iyo macruufka 9.3 warar la xaqiijiyay
Xanta ayaa xaqiijisay in iPhone 7 uusan lahaan doonin codka maqalka. Sideen ku ogaan karnaa? Waxaan ugu sheegeynaa Podcastka
Netflix wuxuu gaari doonaa wadar ahaan 190 dal, wuxuu ka faa'iideysan doonaa App-kiisa 'iOS'
Netflix wuxuu ku dhawaaqay intii lagu jiray CES 2016 ballaarinta helitaanka adeegga, oo gaaraya wadar ahaan 190 dal.
Barnaamijka wararka ee 'iPhone News' waxaan dooneynay inaan kuugu soo qaadno falanqeyn filimkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Shaqooyinka uu Director ka yahay Danny Boyle oo uu jilay Michael Fassbender.
Xawaaraha loo yaqaan 'Speedify for iPhone' (iyo Android) waxaad ku dhex mari kartaa internetka xawaare buuxa adigoon waxba ka maqnayn.
Toddobaadkii ugu fiicnaa ee ku hareeraysnaa adduunka Apple guud ahaan iyo kan iPhone gaar ahaan.
6 × 17 Podcast ee Actualidad iPhone: Mawduuca Ka Bax
Bandhigan waxaan uga hadlaynaa wax walba marka laga reebo Apple
Kooxda Actualidad iPhone waxay idiin rajeyneysaa sanad wanaagsan
Waxaan soo aruurineynaa wararkii ugu dambeeyay ee iPhone 7 waxaana sameynaa dib u eegis ku saabsan cilladaha teknolojiyadeed ee sanadka
2 × 16 Podcast ee Actualidad iPad: Apple sanadka 2016, filashooyinka iyo xanta
Podcast-kii ugu dambeeyay ee sanadka aan dib u eegis ku sameyno waxa aan dooneyno inaan aragno sannadka 2016-ka.
Muxuu Steve Jobs u bixin waayey injineeradiisa wax badan?
In kasta oo Apple u janjeerto inay bixiso lacag aad u fiican, haddana injineerada oo dhami ma laha mushahar sare. Waxaan kuu sheegeynaa sheekada jawaabta Evan Doll iyo Steve Jobs.
Barnaamijyada ugu fiican sanadka - Juan Colilla
Tifatirayaasha oo dhami waxay sameeyeen liisaska codsiyada ugufiican sanadka, anigana waxaan kusoo bandhigayaa kuwa horumaray noloshayda sanadkan 2015.
Twitter waxay go’aansatay inay la wareegto WhatsApp, oo ay hadda leedahay Facebook, si kor loogu qaado farriimaha baraha bulshada.
Ururinta cajiibka ah ee asalka Kirismaska ​​waxaad ku labbisan kartaa iPhone-kaaga si aad u wajahdo Kirismaska.
Soo koobid cusub oo toddobaadle ah oo leh ogeysiisyada waaweyn ee la xiriira adduunka Apple guud ahaan iyo gaar ahaan iPhone.
Ka eeg DVD-yadaada iTunes, iPhone ama iPad adoo wata MacX DVD Ripper Pro (Tartan)
Sida loo daawado DVD-ga iPhone ama iPad
Soo koobid toddobaadle ah ee wararka ku hareeraysan iPhone-ka qayb ahaan iyo guud ahaan Apple
Qalabka A9 ayaa ka awood badan midka imanaya ee Snapdragon 820
Dhibcaha AnTuTu Benchmark ee processor-ka soo socda ee Qualcomm, Snapdragon 820, waa la daadiyay oo niyad jab ayay nagu reebaysaa.
Hadiyadaha Geek ee ugu wanaagsan Kirismaskan
Waxaan ku soo ururinay liistada hadiyadaha Geek ee ugu wanaagsan Kirismaskan, wax walba iyo qof walba, hubaal markaad jaleecdo waxaad ka heli doontaa hadiyadda ugu fiican.
Waxaan sameeynaa liis ah hadiyadaha Apple ee ugu wanaagsan Kirismaskan, oo leh alaabada iyo agabyada Apple ee kuwa horey u heystay, ma dhici doontid
6 × 15 Podcast ee Actualidad iPhone: Adeegga TV-ga ee qulqulaya ee Apple ayaa hoos u dhacaya
Waxaan ka hadlaynaa Taylor Swift iyo Apple oo ku fashilmay adeegga TV-ga
Hadda waa xilligii la qiimeyn lahaa wanaagga iyo xumaanta shirkadda Apple sannadkan. Qalab cusub, qalab cusub, adeegyo cusub ... Kuwa ugu wanaagsan uguna xumaa sanadka shirkadda tufaaxa
Casharradan fudud waxaan ku tusaynaa sida loo isticmaalo laba koonto oo kala duwan oo WhatsApp ah isla iPhone-ka oo aan lahayn Jailbreak.
6 × 14 Podcast ee Actualidad iPhone: Kiiska cusub ee la dhaleeceeyay ee iPhone 6s
Waxaan falanqeyneynaa kiiska cusub ee ay Apple u sameysay iPhone 6s
2 14 Podcast oo laga helo iPad News: IOS 9.2, watchOS 2.1, OS X 10.11.2 iyo tvOS 9.1
Qeyb cusub oo ka mid ah barnaamijkeenna toddobaadlaha ah ee aan ku falanqeyno wararka ku saabsan macruufka, tvOS, watchOS iyo OS X sida noocyadoodii ugu dambeeyay.
HiPStore wuxuu ku dhuumanayaa dukaanka barnaamijka burcad-badeedka Apple AppStore
HiPStore waxay ku guuleysatay inay dukaankeeda dukaanka burcad-badeedda, DailyHiP, ku soo dhufato AppStore iyadoo hareer martay hababkii Apple ay u maamuli jirtay tayada.
Apple TV miyuu leeyahay mustaqbal ahaan lataliye? Jawaabtaydu waa haa
Waxaan ka fikirnaa mustaqbalka rajada leh ee qalabkan adduunka ciyaaraha fiidiyowga waxaan falanqeyneynaa inay guuleysan karto iyo in kale.
KinoConsole waxaad ka ciyaari kartaa kombuyutarkaaga iyo ciyaaraha Steam ee ka socda iPhone ama AppleTV 4, xitaa muraayadaha VR iyo HeadTracking, waxaan ku darnaa nambarro, orod!
Waxaan falanqeynay iPad Pro oo waxaan barbar dhignay Samsung Galaxy View
Freeblade Warhammer 40K, ciyaartii muujisay awooda garaafka ee iPhone 6s, hadda waa la heli karaa
Cayaarta muujisay awooda garaafka ee culeyska cusub ee A9 inta lagu gudajiray soo bandhigida iPhone 6s ayaa hada laga heli karaa App Store si bilaash ah.
Yoigo ugu dambeyntii wuxuu na siiyaa waxa isticmaalayaashu ay codsadeen wax badan, barnaamij lagu xakameynayo sicirkeenna saxda ah ee ka socda iPhone-ka.
Xanta ku saabsan iPhone cusub 7, Black Friday iyo warar kale oo ku saabsan Podcast-ka todobaadlaha ah ee Actualidad iPad
Ninkan Jabbaananka ah ee wata sirta sirta ah ee iPhone-ka ayaa mowduucyo badan ka yeeshay shabakadda toddobaadkan.
Liiska hadiyadaha loogu talagalay geeksyada, ka faa'iideyso Cyber ​​Isniinta oo filo Kirismaska.
Waxaan kaa dhigaynaa hage leh hadiyadaha ugu fiican ee loogu talagalay taageerayaasha Apple, kuwa ugu caansan farsamada iyo xitaa khayaaliga sayniska, dalabyada ugu fiican.
Baro wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xiriirkaaga internetka oo ku xir xiriirinta gurigaaga mid la mid ah iPhone-kaaga, Mac iyo aaladaha kale.
Sida loo hagaajiyo "Dib u Deji Lama Tilmaami Karo" Dukaanka App
Casharkaan fudud waxaan ku tusineynaa sida dib loogu iibsado codsiyada aan horey ugu soo celinay App Store.
Waxaan soo koobeynaa wararka ugu waaweyn ee la xiriira Apple guud ahaan iyo gaar ahaan iPhone-ka
Kuwo badan ayaa ah codadka saadaalinaya geeri dhow oo loo yaqaan 'JAILBREAK', si kastaba ha noqotee, sida sanad kasta, JAILBREAK wuxuu leeyahay mustaqbal ifaya
Iyadoo Bebop Drone 2 suuqa, Baqbaqaaqku wuxuu ku soo laabanayaa dagaalka iyadoo la socota teknolojiyaddii ugu dambeysay si uu noogu soo bandhigo wax soo saarka ugu fiican qiimaha ugu fiican.
Qeybtan ka mid ah barnaamijyadeenna 'podcast' waxaan ku falanqeyneynaa xoogga iyo daciifnimada iPad Pro iyadoo ay la socoto fikradda laba dhegeyste oo horeyba gacantooda ugu jiray.
Waxaan ku barnaa sida gebi ahaanba loo tirtiro akoonkaaga WhatsApp si qof kale oo lambarka taleefankaaga qaata uusan u helin xogtaada.
Waxaan ku tusineynaa sida loo soo dejisto emulatorka Nintendo DS qalabkaaga iOS iyo sida loogu wareejiyo cayaaraha aad jeceshahay qalabkaaga kumbuyuutarka ee cusub.
WeatherBoard ayaa loo cusbooneysiiyey qeybtiisa labaad ee iOS 9 iyo iPad [Muuqaal]
WeatherBoard wuxuu gaarayaa qaybtiisa labaad si loogu daro taageerada iOS 9 iyo iPad, marka lagu daro dabcan in lagu daro howlaha nidaamyadan cusub.
Imaatinka Apple Music ee Android, bilaabida iPad-ka cusub iyo fashilka filimka Steve Jobs
Tilmaanta ku saabsan WhatsApp Web ee loogu talagalay iPhone: baro sida WhatsApp webka loo hawlgeliyo loona adeegsado kombiyuutarka iyo bilaa JAILBREAK.
2 × 09 Podcast ee Actualidad iPad: Apple TV cusub, Betas iyo inbadan
Qeyb cusub oo ka mid ah Actualidad iPad Podcast oo aan uga hadlayno Apple TV-ga cusub iyo warar dheeraad ah oo la xiriira Apple.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad nala baari doontid quruxda iyo xiisaha nidaamka qorraxda, dhammaantoodna lagaaga soo diro iPhone-kaaga oo wata Solar Walk 2, quruxdeeda qaabkeeda ugu nadiifsan.
Jaangooynta Pangu ee iOS 9 oo ka socota Mac OS wuxuu soo saaraa cillad la yiraahdo "ku guuldareystay inuu soo qaado" oo aan ku tusino sida loo hagaajiyo.
U wareeji iPhone-kaaga diyaarad drone ah mahadnaqa PhoneDrone Ethos
PhoneDrone waa qalab u rogaya taleefankaaga casriga ah (ha ahaado Android ama iPhone) mid diyaarad dhammaystiran oo si buuxda u shaqeynaya wax ka yar € 200.
Ciyaaraha jiilka cusub ayaa bilaabaya inay ku yimaadaan AppStore si ay uga faa'iideystaan ​​qalabka cusub ee iPhone 6s ama qalab leh 64-bit chip.
Podcast cusub oo ka socda Actualidad iPad oo aan ku falanqeyneyno Apple TV-ga cusub ee hadda yimid Spain iyo Mexico.
Casharradan waxaan ku tusaynaa sida looga saaro bogagga sida joogtada ah loo booqdo ee Safari ee macruufka 9.
Waxaan si qoto dheer u eegeynaa processor-ka cusub ee iPhone 6s
Sida hoos loogu dhigo macruufka 9.1 ilaa iOS 9.0.2
Actualidad iPhone waxaan kuugu keenaynaa casharka ku saabsan sida hoos loogu dhigo iOS 9.1 iyo iOS 9.0.2.
Podcast-ka cusub ee Actualidad iPad kaas oo aan si toos ah ugala hadlayno wararka usbuuca, sida imaatinka Netflix ee Spain
Qalabka hoos u dhiga caanka ee loo yaqaan OdysseusOTA ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.0 si hoos loogu dhigo iOS 9 ilaa iOS 8.4.1
Qeybta labaad ee loo yaqaan 'iOS 9 Jailbreak' oo loo yaqaan 'BLoD' ayaa xal ku leh, Actualidad iPhone oo leh casharkeenna ayaan ku tuseynaa.
SolidLUUV ama Sidee loo hagaajiyaa kamaradda iPhone-ka?
SolidLUUV ama UltraLUUV waxaan kuheli karnaa xasilinta muuqaalka farsamada iyo elektarooniga ah iphone 6 iyo 6s, hagaajinta mida 6s Plus lafteeda.
Qeyb cusub oo ka mid ah barnaamijkeena 'Podcast' kaas oo aan ku falanqeyneyno iPhone 6s cusub iyo dhibaatooyinka loo maleynayo in ay ka qabaan geedi socodka iyo gubashada.
Waa wax cajiib ah sida Farsamada elektaroonigga ah ay u soo jeedisay in ay ku baabi'iso dhammaan waxyaabaha ay ku keydineyso barnaamijka macruufka 'Pay-to-Win' ama 'freemium model'.
Shahaadooyinka asaasiga ah ee murugsan ee amnigayaga wax u dhimaya macruufka ayaa si fudud looga saari karaa casharkeenna.
Codsigan cusub waxaad ugu wareejin kartaa oo keliya macluumaadkaaga Caafimaadka iyo Waxqabadka barta cusub ee iPhone-ka adiga oo aan dib u soo celin kaydadkii.
Maanta waxaan sharxeynaa sababta xiritaanka barnaamijyada ku shaqeeya macruufka aysan kaliya u badbaadinayn baytariga, laakiin ay dhaqso ugu daadinayaan.
Waxaan ku falanqeyneynaa wararka Microsoft Microsoft oo leh 'Surface Pro 4' oo ah aaladda ugu caansan, waxaanna ka hadleynaa xilligii Steve Jobs xilligiisii. Waxaa jira qol looga hadlo waxyaabaha ugu horreeya ee El Capitan iyo iOS 9.1 Beta 4
Crownstone waxaad ku qalabeyn kartaa gurigaaga caqli ahaan waxaadna ka koontarooli kartaa gurigaaga raaxada taleefankaaga casriga ah.
Podcast 2 × 04: OS X El Capitan waa halkan, sida iOS 9.0.2 iyo 9.1 Beta 3
Apple ayaa hadda sii deysay OS X El Capitan, ios 9.0.2 iyo waliba beta-kii saddexaad ee iOS 9.1. Intaa waxaa dheer, IPhone 6s iyo 6s Plus ayaa jabiyay rikoor cusub oo iib ah.
Podcast 6 × 04: iPhone 6s Dib u eegista Maqalka
Toddobaadka Podcast-ka waxaan ku eegeynaa iPhone 6s, ka dib markii aan isticmaalnay ku dhowaad toddobaad
Tijaabaddii saddexda bilood ahayd ee Apple Music way dhammaatay, sida loo joojiyo rukunkaaga
Casharradan fudud waxaan ku tusaynaa sida looga noqdo rukunkaaga Apple Music kahor intaan tijaabada la dhamayn.
Dukaamada Apple ee been abuurka ah ayaa ka soo baxa Shiinaha ka hor inta aan si rasmi ah loo bilaabin iPhone 6s
Shiinaha waxaa ka buuxa dukaamo khiyaano ah oo iska dhigaya Apple Stores isla markaana iibinaya iPhone 6s cusub, aaladaha isu roga in ay noqdaan clones been abuur ah oo Android ah.
Waxaan horeyba u haysanay tijaabadii ugu horeysay ee iska caabin ah ee iPhone 6s iyo 6s Plus ah dhexdeenna, shaki la'aan waxay caddeeyeen inay aad uga adkeysi badan yihiin kuwii hore.
Qeyb cusub oo ka mid ah barnaamijka loo yaqaan 'Actualidad iPad Podcast' oo aan ku falanqeyneyno bilaabista iOS 9, warkeeda, barnaamijyada la cusbooneysiiyay, iwm.
Sida loo hagaajiyo "lag" ka dib markii la rakibo iOS 9
Tallaabooyinkan fudud ee aan kuugu sheegayno iPhone News waxaad ku hagaajin kartaa dib-u-dhacaas ka muuqda macruufka 9.
Sababaha loogu beddelo jiilka xiga ee iPhone 6s iyo 6s Plus
Waxaan sameeynaa liistada sababaha ugu muhiimsan ee muhiimka ah sababta ay ugu habboon tahay in loo cusbooneysiiyo jiilka cusub ee iPhone, iPhone 6s iyo 6s Plus.
Siri wuxuu joojinayaa shir jaraa'id oo uu ku qaban lahaa Aqalka Cad markii loo hawlgaliyo qaab aan munaasib ahayn, xaalad in badan lagu celin doono imaatinka iPhone 6s.
2 × 02 iPad Podcast Podcast: Apple's Post Falanqaynta Muhiimka ah
Qeyb cusub oo ka mid ah Actualidad iPad Podcast oo aan uga hadlayno wax walba oo dhacay intii lagu gudajiray muxaadaradii loogu talagalay soo bandhigidda iPhones cusub.
Muuqaalka filimka 'Pokémon GO' ayaa si rasmi ah loo sii daayay, sharadka cusub ee Nintendo si uu adduunkan isugu keeno Niantic iyo taleefannada casriga ah.
IPhone 6s waji ka waji ayaan u galineynaa iPhone 6, natiijooyinka waa cad yihiin laakiin waa inaan lumin rajada, ma mudan tahay in la cusbooneysiiyo?
Xanta cusub ee ku saabsan iPhone 6s! IPhone-yada cusub ee berri waxay qaadan karaan boodbood weyn oo xallin ah
Xanta cusub ee ka socota Weibo waxay xaqiijineysaa in iPhone 6s iyo 6s Plus ay arki doonaan in shaashadooda shaashadu ay u kordhayso FullHD iyo 2K siday u kala horreeyaan.
Xanta cusub ee laga helay ilo lagu kalsoon yahay waxay xaqiijineysaa in iPhone 7 horeyba loogu talagalay 2016 iyo inuu noqon doono iPhone kii ugu khafiifsanaa taariikhda.
Apple waxay qorsheyneysaa inay ku laabato tiknoolajiyaddii hore ee On-Cell si ay u kordhiso xallinta iyo aagga dusha sare ee bandhigyadeeda si loo helo saxnaan ballaaran.
Qeybtii ugu horreysay ee xilli-ciyaareedkii labaad ee fiidiyowgeena oo aan ku falanqeyno wararka tiknoolajiyada iyo mowduucyada kale sida taxanaha, filimada iyo muusikada.
Waxaan u fureynaa albaabada uguhoreysa aduunka barnaamijka, waxaad bilaabi kartaa BILAASH oo waxaad kusii wadan kartaa barashada qiimaheeda qosolka, fikradahaaga noolow.
Waxaan kuu keeneynaa liistada saxda ah ee muusikada si aad u aado jimicsiga
Liiska aan kuu diyaarinay, waxaad ku raaxeysan kartaa muusikada ugu dhiirrigelinta jimicsiga kaliya adoo ku daraya Apple Music-kaaga.
Saadaasha Toddobaadka: Miyaad u malaynaysaa inay Apple soo saari doonto dahab dahab ah oo iPhone 6s ah?
Apple ayaa bilaabi karta billowga dahabka iPhone sannadkan. Suurtagal ma aragtaa?
Waxaan ka wada hadalnay suurtagalnimada in Apple uu suuqa keeno 5-inji cusub oo iPhone ah oo wata xallinta Full HD, iPhone 6s ama iPhone 7? Maxaad u malaynaysaa?
Waxaan ku soo uruurineynaa hal maqaal oo ah kulamada ugu fiican iPhone-ka ee Ogosto 2015, shaki la'aan ciyaar kasta waxay ku siin doontaa khibrad gaar ah.
Multiplexer waa mindida ciidanka Switzerland ee shaqooyinka badan ee ku saabsan iOS, 6 tweaks oo mid ka mid ah keenaya awood aan la arkin oo qalabkaaga ah.
Nooca cusub ee nidaamka mobilada ee Apple wuxuu kuu oggolaanayaa inaad jadwal u sameyso cusbooneysiinta OTA ee habeen kasta si ay kuu badbaadiso sugitaanka.
Kooxda 17 waxay soo bandhigaysaa qaybtii afraad ee dirqi dagaalyahankeedii, Worms 4, oo ku yaal AppStore ee ugu xiisaha badan iyo halgamayaashu inay ku raaxaystaan.
Farsamaynta cusub ee loo yaqaan 'Cyte' waxay suurtogal ka dhigeysaa in la nadiifiyo sharraxaadda xirmooyinka Cydia iyadoo dib loo habeeyo qoraalka oo laga saaro xayeysiinta faragelinta.
Actualidad iPhone-ka waxaan ku falanqeyneynaa shineemo hadda jirta iyo mid soo jireen ah, markan waxay ahayd marki ay bilaabatay Jurassic World, oo aan ka baxsan dhaleeceynta caalamiga ah.
Waxaan dib u eegeynaa sababaha ugu muhiimsan ee aad u xiri laheyd qalabkaaga.
RHA MA750i, sameecadaha dhageysiga ee ugu sarreeya ee iPhone-kaaga
RHA MA750i waa samaacadaha dhagaha ugu fiican ee aad ku heli doontid € 90, qiimo qaali ah, naqshadeynta iyo dhismaha qiimo jaban oo gelitaan ah.
Heesta xagaaga 2015 ku soo dejiso iPhone-kaaga oo ku raaxee xul 10 ka heesood ee ugu caansan xilligan xagaaga
U hel Apple Music wallpapers-ka iPhone-ka oo ku raaxayso astaanta cusub iyo shaashadda uu Apple u sameeyay adeegga muusigga.
Thanks to iEmulators waxaan ku dhejin karnaa emulatorka Nintendo DS ee macruufka si deg deg ah oo fudud, Actualidad iPhone ayaan kuu sheegi doonaa sida.
Bandhigii toddobaadkan waxaan ka wada hadalnay waxqabadka iOS 8.4 iyo cillado, sida iOS 9 beta 2 u shaqeeyo, oo aan u wadaagnay dareenkeennii ugu horreeyay ee Apple Music
1 × 32 Podcast ee Actualidad iPad: Apple Music, Jailbreak iyo dhamaadka xilli ciyaareedka
Podcast-kii ugu dambeeyay ee xilliga aan ka hadlayno Apple Music iyo Jailbreak ee iOS 8.4
Codbixinta Toddobaadka: Miyaad joojin doontaa rukunkaaga Spotify ka dib markaad isku daydo Apple Music?
Waxaan weydiinay kuwa raacsan: yaa ku guuleysan doona dagaalka u dhexeeya Apple Music iyo Spotify?
Apple Watch 2 ee cusub ee 2016 iyo muranka Apple Music waa qaar ka mid ah mowduucyada aan uga hadlayno barnaamijkan Podcast-ka ah.
Maanta Actualidad iPhone waxaan kuugu keenaynaa cashar fudud si aad uga beddeli karto lambarka sirta ah ee kaarkaaga SIM-ka iPhone-ka.
Toddobaadkan waxaan ka hadlaynaa warka uusan Apple na tusin nuxurkiisa, macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Apple Music, iOS 9 Jailbreak, iwm.
1 × 29 Podcast: WWDC 2015 Gaarka ah
Podcast kaas oo aan ku falanqeyno dhammaan wararka WWDC 2015 kaas oo lagu soo bandhigay iOS 9, OS X 10.11 El Capitan iyo watchOS 2.0.
Podcast cusub oo aan ku falanqeyneyno wararka ka imanaya Google, waxa Apple ku soo bandhigi karto WWDC 2015 iyo qalabka cusub ee loogu talagalay HomeKit.
Intii aan ku guda jirnay safarkayaga aaladaha Apple, gaar ahaan kuwa aniga oo kale ah waxay isticmaalaan Windows iyo kumbuyuutar kala duwan ...
Qayb cusub oo ka mid ah Podcast-ka toddobaadlaha ah ee loo yaqaan 'Actualidad iPad' kaas oo aan ku falanqeyno wax kasta oo ka dhacay Apple, nidaamyadiisa hawlgalka iyo barnaamijyada
Qeyb cusub oo ka mid ah barnaamijka loo yaqaan 'Actualidad iPad podcast' oo aan uga hadlayno wixii ku saabsan iPhone 6s ee soo socda, amniga Apple Watch iyo waxyaabo kale oo badan.
Sida loogu beddelo saamaynta Siri kuwa JARVIS
Casharradan ayaa kuu oggolaan doonta inaad codka Siri u beddesho ta JARVIs, Kaaliyaha biraha ah ee Iron Man.